Abavelisi beekhowudi abaqhubi- abaThengi be China Caps abaThengisi kunye noFektri
Indawo yokutyela ekhitshini I-Waiter Chef Driver Caps U408S0100S
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U408S0100S Ubungakanani BOKU-1 Amagama aphambili okubhekisa, iikomityi zokuhombisa, iminqwazi yokulinda Indwangu 65/35 isininzi / ikotoni GSM.235g Ukuthunga kwentambo yePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-isikhutha, kwaye uyenza ...
Indawo yokutyela ekhitshini I-Waiter Chef Driver Caps U408S0400A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U408S0400A Ubungakanani BOKUQALA Amagama aphambili okubhekisa, iikomityi zokulinda, iminqwazi yokulinda Indwangu 65/35 ipateni / ikotoni GSM.235g Ukuthunga kwentambo yePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-isikhutha, kwaye uyenza ...